Momba an'i Sharjah | Law Firms Dubai
Momba an'i Sharjah
toerana mahafinaritra ny fianakaviana
Fantatra taloha hoe Trucial States na Trucial Oman, i Sharjah no emirate fahatelo lehibe sy be mponina any UAE. Sharjah, dia nanoratra ihany koa Al-Shāriqah ("The Eastern") efa mahalala tsara ny taniny mahafinaritra sy ny velaran-dranomasina. Izy io dia manana 2,590 metatra. Km ary misy 3.3 isan-jaton'ny velarantanin'ny Emira Arabo Mitambatra (ireo nosy tsy tafiditra amin'izany).
toerana mety ho an'ny tompona orinasa
Tsenan'ny fananana haingana dia haingana
I Sharjah no renivohitry ny Emirates of Sharjah ary mizara mitovy kolontsaina sy politika miaraka amin'ny Emirates hafa. Notsidihin'ny mpizahatany be dia be ny vokatry ny fiarahamonina ara-kolontsaina.
Miaraka amin'ireo andrim-pampianarana isan-karazany, Sharjah dia miantoka famatsiana talenta vaovao tsy manam-petra miaraka amin'ny fahalalana farany amin'ny siansa, teknolojia, injeniera ary fahaiza-manao hafa izay manatsara ny fitomboan'ny harinkarena. Raha ara-jeografika dia eo akaikin'ny Dubai no misy an'i Sharjah ary tototry ny habaka maitso mahatalanjona ny emirate.
Toerana iray ihany koa izay mankasitraka ny fiainana ivelan'ny trano ary mankalaza fomba fiaina iraisana ho an'ny mponina sy ny mpitsidika. Ireto misy zavatra mahagaga maro tokony ho fantatrao momba an'i Sharjah:
Ny isan'ny mponina Sharjah dia 2,000 tamin'ny taona 1950, fa tamin'ny taona 2010 ny isan'ny teratany UAE ao amin'ny emirat an'i Sharjah dia notombanan'ny Fahefana misahana ny fifaninanana sy statistika ho 78,818 (Lahy) ary 74,547 (Vavy) nitondra ny isan'izy ireo 153,365 . Araka ny vinavinan'ny Departemantan'ny Statistika sy ny Fampandrosoana ny Vondrom-piarahamonina, ny isan'ny mponina Sharjah dia 1,171, 097 tamin'ny 2012, ary hatramin'ny 2015 dia nitombo 409,900 5.73 i Sharjah izay maneho ny fanovana XNUMX% isan-taona.
Ao amin'ny 2020, ny isan'ny mponina ao Sharjah dia tombanana ho 1,684,649. Ireo tomban'ezaka sy vinavinan'ny mponina ireo dia avy amin'ny fanitsiana nataon'ny UN World Urbanization Prospects ary ny tombana dia maneho ihany koa ny fanangonam-bokatra an'i Sharjah nitranga. Mpitsoa-ponenana maherin'ny 1.2 tapitrisa no monina ao Sharjah, ho an'ny Emeratis, betsaka kokoa noho ny lahy ny isan'ny vehivavy fa ny isan'ny lehilahy mpila ravinahitra dia betsaka noho ny vehivavy.
Ny departemanta statistika sy ny fampandrosoana ny fiaraha-monina dia maminavina ny isan'ireo mponin'i Sharjah dia 175,000 20 Emiratis. Ny fitsidihan'ny vahoaka araka ny antokon-taona dia mampiseho ny 39 ka hatramin'ny 700,000 ho vondrona lehibe indrindra misy olona 57,000. Mihoatra ny 40,000 ny mpianatra manontolo andro mipetraka ao Sharjah. Manodidina ny 75,000 eo ny olona tsy an'asa. Ny ankamaroan'ny olona ao anatin'ny tanàna dia miasa ho an'ny sehatra tsy miankina, fa XNUMX XNUMX eo ho eo kosa no miasa ho an'ny governemanta eo an-toerana na federaly.
Arabo no fiteny ofisialy amin'ny teny Sharjah, fa ny teny anglisy dia fiteny iray hafa ampiasaina manerana ny tanàna. Ary misy koa fiteny hafa ampiasaina ao anatin'izany Hindi sy Urdu
Ny ankamaroan'ny mponina dia manaraka ny fivavahana silamo ary ny fomba fiainan'ny olona ao Sharjah dia manondro ny fifikirana amin'ny tenin'ny silamo. Misy lalàna henjana momba ny fahalalam-bahoaka natao tamin'ny 2001 izay mandrara ny lahy sy ny vavy tsy mifandraika amin'ny lalàna mba ho hitan'ny besinimaro, ary mandidy ny akanjo fitafy fikajiana hentitra ho an'ny lahy sy ny vavy. Toy izany koa ny fitsipiky ny mpizahatany ihany koa.
I Sharjah irery no Emirate any UAE izay mandrà ny fanjifana sy ny fivarotana toaka miaraka amin'ny fahazoan-dàlana. Ny zoma sy sabotsy dia nanaovana fialantsasatra hanomezam-boninahitra ny andro fivavahana silamo izay zoma. Na izany aza, misy fepetra fanampiny amin'ny fitondran-tena mety mandritra ny volana masina Ramadany raha mifady hanina ny ankamaroan'ny olona ao an-tanàna.
Sharjah dia manana haingam-pandeha trano lehibe. Ny Emirate dia nahita fiakaran'ny tombotsoan'ny mpampiasa vola manerana ny Moyen Orient ary mihoatra ny hatramin'ny nanapahan'ny governemanta hivarotra fananana ho an'ny olom-pirenena rehetra tamin'ny taona 2014.
Sharjah ankehitriny dia toerana iray ankafizin'ny tompona orinasa. Manana fotodrafitrasa maoderina, lalàna mifehy ny fandraharahana ary manohana ny fanavaozana sy ny fanararaotana. Ity emirate ity dia manana toerana lehibe indrindra, izay mametraka orinasa kely 45,000 XNUMX eo ho eo izay mifantoka amin'ny trano sy trano, fanamboarana, fikarakarana ara-pahasalamana, fanabeazana, fizahan-tany, entona, lozika ary serivisy fandraharahana maro.
Ny famokarana dia loharano tena ilain'ny toekarenan'i Sharjah ary mandray anjara manodidina ny 19 isan-jaton'ny harin-karena faobe isan-taona. Ny GDP dia nahatratra manodidina ny AED 113.89 miliara tamin'ny 2014. Ny Emirate dia manana faritra indostrialy 19 izay mandray anjara amin'ny 48 isan-jato mahery amin'ny vokatra indostrialy UAE.
Manana seranan-tsambo telo i Sharjah izay misy velarantany 49,588,000 km km. Ary koa, manana zona roa maimaimpoana izy, dia ny Faritra SAIF sy ny Faritra Hamriyah. Ary koa, Expo Center Sharjah dia iray amin'ireo foibe fampirantiana malaza indrindra any Sharjah izay mandray hetsika B2B sy B2C isan-karazany.
Sharjah dia toeram-piasana maro be. Orinasa marobe no efa natsangana teto hatrizay ary maro ireo orinasa no nitombo ny foibem-paritra aty amin'io faritra io. Ny fametrahana orinasa any Sharjah dia zavatra tianao hotsinjovina.
Sharjah no renivohitry ny kanto ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra. Ny tanàna dia mirehareha amoron-dranomasina manintona, zaridainam-panjakana, tranombakoka, bibidia ary zava-manintona arabo marobe toy ny Al Majaz Waterfront, Kalba, Mosque Al Noor, Eye of the Emirates, ary maro hafa.
Ny renivohitra Museum Museum of Sharadization ary ny Art Museum no zava-mahasarika mpizahatany ao an-tanàna ary raha feno ny tranobe mahaliana izay mampiseho ny tantaran'ny Emirati ny Heritage Area.
Sharjah dia toerana mety indrindra ho an'ny fianakaviana izay afaka ankafizin'ny fianakaviana iray manontolo, manomboka amin'ny ankizy ka hatrany amin'ny raibe sy renibe. Afaka mankafy ny safidin'ny fialamboly malalaka ny ankizy fa ny olon-dehibe kosa afaka mahita fampiononana ao amin'ireo galeriana sy tsangambato manan-tantara.
Sharjah dia mariky ny fanovana kolontsaina, fahiratan-tsaina ary maritrano ny trano arabo ao UAE.
Ny UNESCO dia nanome an'i Sharjah ny anaran'ny renivohitry ny Kolontsaina Arabo tamin'ny taona 1998, ary tamin'ny taona 2014 izy no nahazo ny anaram-boninahitra ny Renivohitry ny Kolontsaina Silamo. Hatramin'izay dia notehirizin'i Sharjah ny fandraisany ny kolontsaina.
Amin'ny maha foibe ivon'ny kolontsaina azy, i Sharjah dia fonenan'ny trano fikarohana siantifika marobe. Ho fanampin'ny lanjany ara-kolontsaina dia nahazo vahana sy manome lanja bebe kokoa ny Old Sharjah noho ny fiovan'ny trano sy ny tranobeny ho tranom-bakoka haingon-trano, fitaovana ara-javakanto, efitrano fampisehoana, ateliers ho an'ny calligraphers ary mpanakanto plastika. Noho izany, manintona mpikaroka sy mpankafy zavakanto ary kolontsaina maro i Sharjah.
Fantatra amin'ny andraikiny i Sharjah amin'ny maha mpitari-dàlana ny hasina ara-kolontsaina sy ny kanto kanto. Izy ity dia malaza ihany koa amin'ny fahafahany manangana ny mombamomba ny kolontsaina izay mampifangaro ny fotony islamika mifangaro amin'ny fahitana ankehitriny ary mitazona ny kolontsaina maha-olombelona.